Creative Writing » ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ အလွဲများးး	45
ဘောလပင် ကြိုက်ရာ ယူ ခိုင်းပါတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း တရုတ်လို ပြော … ကိုယ် က သိပ်နားမလည်။ အဲဒါကို ကေဇီက မယူတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်းး၊ (အမှန်တော့ ကိုယ့် အတွက် လည်း မလိုဘူးလေ)
မင်းသားကြီး တစ်ခါက ကြုံဖူးသတဲ့။ ဆရာ တပည့်တွေ အဲလို တူတာပါဆို။ အဲဒီကတည်းက အလကားမပေးရဲတော့တာပဲတဲ့။
manawphyulay says: အလှူခံတွေ များချက်ကတော့ ဒီလ အိမ်စရိတ်တောင် မကျန် အားလုံးပြောင်ချက်ပါပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘာပဲပြောပြော သာဓု ခေါ်ပါတယ် မနောရယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: တလောက ထူးထူးဆန်းဆန်း
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခရစ်စမတ်ဆို ကလစ်လေးတွေလည်း ရောင်းတယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ဒါနဲ့ စကားမစပ်
Mike says: .ကျုပ်လည်းတစ်သဘောတည်းပဲ ကိုဂျက်ရေ…ကလေးလိုမြို့မျိုးမှာ ကြုံးထုတ်တူးထုတ်ရမဲ့ .သဲနှုံးတွေနဲတာမဟုတ်..ဘယ်အစိုးရ၀န်ထမ်းမှလာမလုပ်ဘူး…ကူညီကယ်ဆယ်သူတွေလည်းပါ……..တာပေးပြီးပြန်ကြမှာ..ဘယ်သူမှဝိုင်းလုပ်ပေးချိန်မရ..သူတို့ကိုပဲ .အလှူငွေနဲ့နေပစားခထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးပြီးခိုင်းသင့်တယ်…သူတို့အနေနဲ့ကိုယ့်မြိုကကိုယ့်ရွာလ…ည်းသန့်ရှင်း..၀င်ငွေလည်းရ…၀င်း..၀င်း ပဲ
ဦးကျောက်ခဲ says: အဲဒါတစ်ခုတော့ စလုံးကို ချီးကျူးတယ်…
မြန်မာသီချင်းကို ဟာမိုနီကာနဲ့ ဖျော်ဖြေတဲ့ အဘိုးကြီးရော ရှိသေးလားဟမ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရောက်စကတော့ ၂ ခါလား တွေ့သေးးး
ဒီချောင်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကုသိုလ် ရပါတယ် တဂျီးရဲ့။
kai says: အဲဒီကုသိုလ်/ငရဲ..ကို.. ပေးပိုင်ခွင့်..
ထူးပေသည့်ဆန်းရာ..။ Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘာပဲပြောပြော ကောင်းတာ လုပ်ဖို့တော့ လိုတယ်မလားး???
Was this answer helpful?LikeDislike 63
ဟေသီ says: ဘာသာရေးနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ဘုရားဟောသွားတဲ့ တရားထဲ အလကား တောင်းပါလို့ တစ်ခုမှ ပါမှ မပါတာ။ အလှူရှင်ဘက်က တွေးရမယ့် အတွေးမှာသာ သူဘာသာဖြစ်ဖြစ် လှူဖို့ပြောတာ။ ဒါတောင် အဲ့ အလှူက ပါရမီမြောက်အောင် လှူတဲ့အချိန်ကို ပြောတာနော်။ အလှူခံဘက်က ဒီအတိုင်း အလှူခံပါလို့ တစ်လုံးမှ မပါဘူးရယ်။ ရဟန်း စားရသော ဆွမ်းတစ်နပ်ဆိုတာ အလကား ကားမှ မဟုတ်တာ။ ဒီဘုဉ်းပေးလိုက်တဲ့ ဆွမ်းအတွက် ဘယ်လို ပြန်လုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာ ပါတယ်။ ရေပေါ်ဆီ အတွေးအခေါ်ကိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ ဘာသာရေးလို့ မခေါ်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ။ သေချာတာကတော့ ဘုရားဟောတဲ့ တရားမှာ အလကား ယူဖို့ ဆိုတာ တစ်လုံးမှ မတွေ့သလို ဘုရားက အောင်မြင်ဖို့ ကံ၊ ဥာဏ်၊ ဝီရိယ ကိုသာ တွင်တွင်ပြောခဲ့ပါတယ် ရှင်….
Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့လို ဆိုပြီး တီးပြီး တောင်းတာကျတော့
ဇီဇီခင်ဇော် says: အင်းပေါ့။ သတိထားမိလားတော့မသိ။
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟတ်စ် … အရိုးထဲထိအောင်စွဲနေတာက …
Alinsett @ Maung Thura says: ဟိုတနေ့က…. မီးရထားလမ်းနဲ့ ကားလမ်းအဆုံမှာ ကားတွေကြား လိုက်တောင်းနေသူတစ်ယောက်
ဒါကြောင့်…. လိုတာထက် ပို ကားနေတဲ့ သူ့ ချိုင်းထောက် ကို နည်းနည်း စိပေးဖို့ လှမ်းပြောမိတာ…. ”ဘာလို့ ဖယ်ပေးရမှာလဲကွ… မင်းဘာသာ လွတ်အောင် မောင်းပါလား”တဲ့…
ဇီဇီခင်ဇော် says: မသန်မစွမ်း/ ဒုက္ခိတ/ ဟန်းဒီးကက်/ အက်(ဘ) နော်မယ် (ဒါပေမဲ့ ဒီဘက်မှာ အဲလိုတွေမခေါ်ရဘူးးး) ဆိုရင် သူတို့ လုံးဝ မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ အကူအညီပေးသင့်ပေမဲ့
Wow says: ယက်ဆက်တဲ့ အသီးမရှိသူမဂျီးးးးးးး ဟိ… နာတြောက်တင် မြို့ မေတ္တာခံယူချင်သလားမှတ်တယ်…. လူမိုက်က ကျနော် အဖေါ်က ခင်ဇော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖဘမှာ ကတည်းက နိကို ထောက်ခံချင်တာ။
ယူသော်ရ၏ပေါ့။ မယ်ဝါး စတေးတပ်လေး ပါ တင်လိုက်မယ်နော်။
သူ စ တာပါ ခင်ညာ။ Credit to Wow
Was this answer helpful?LikeDislike 2394
aye.kk says: အလွဲတွေကြာလာတော့လည်း
ဇီဇီခင်ဇော် says: တီအေးးး ရေ လွဲသမှ
Ma Ma says: (ကိုယ်က သနားလို့ ဒီတိုင်းပေးတဲ့ ပိုက်ဆံက သူတို့ကို စော်ကားရာကျတယ် ဆိုတာ။)
အချို့မြို့ရွာတွေကတော့ နှစ်တိုင်း ရေကြီးရေလျှံနေကျတွေကလည်း ရေဘေးလို့ပြောပြီး အကူအညီစောင့်နေကြတာကျတော့ စိတ်ပျက်စရာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
အချို့မြို့ရွာတွေကတော့ နှစ်တိုင်း ရေကြီးရေလျှံနေကျတွေကလည်း ရေဘေးလို့ပြောပြီး အကူအညီမျှော်နေကြတာကျတော့ စိတ်ပျက်စရာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကိုယ့်ဆီက အားထုတ်မှုမပါပဲ လိုချင်နေတာ မှားနေတယ်လို့ ဘယ်သူ ပြေါပေးပါ့မလဲ မသိ။
အားကြီး ကိုးကွယ်ချင်တယ်။ အဲဒါက ကြာရင် လူစွမ်းလူစ ကျကျသွားတတ်လို့။
padonmar says: အဲဒီအကြောင်း အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ဘ၀ဖြောင့်ကြောင်းမှာ ကြားပြီးကတည်းက ပြန်ရေးပြချင်တာ စိတ်နောက်ကိုယ်မပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲလာကို ဘုန်းကြီးဟောတာတော့ တင့်တယ်တယ် တီဒုံ။
အောင် မိုးသူ says: ချင်ကြာပူမှာတုန်းက အဖွားကြီးတွေကို အမြဲအားပေးတယ် တစ်ရှူးကိုပြောတာ။ တစ်ခုခု တူရိယာတီးပြီးတောင်းရင်လည်း အကြွေထည့်ပေးတာပါပဲ။ နောက်တစ်ခုမှတ်မိသေးတယ် city hall MRT ရယ် Jurong East မှာရယ် ဂီတာတီးပြီးတောင်းတဲ့ တရုတ်ချောချောလေးတစ်ယောက်ကို ဟိဟိ။ တောင်းတာ တောင်းတာနော်…….. အိုင်ပက် အိုင်ဖုန်းနဲ့ ဟိဟိ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခိခိ။
Mg Yit Htoke says:့မြန်ကျန့် မှာလဲ အရဂါး မရပါဘူး တခါလှူရင် အာဘွားပေးလို့ ရတယ်ဆိုလားးးးးးးး
(ဒါလေးကူတင်ထားတယ် ခည လာခွင့်တောင်းတာ) :P
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲလာ နောက်တယ် ဆိုလားပဲ တော့။
naywoon ni says: မြန်​မာပြည်​က အသံချဲ့စက်​နဲ့ အလှူခံ​ဒွေ စီကာရ်​ပူရ်​ ပို့
အဲ့ဒိက ​ဇေးသယ်​​ဒွေ မြန်​မာပြည်​ပို့ လဲလို့ရရင်​​ကောင်းမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဇီဇီခင်ဇော် says: လဲလိုက်ရမားးး
naywoon ni says: ​ကော်​မီချဉ်​ဆား ဟွတ်​​တော့ဝူး ကန်​ထရွှိက်​ အလှူခန်​ ဖစ်​တွားဘီ ခ်​ခ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ဦးကြောင်ကြီး says: လူတျောက် ဖျစ်ဖူးတယ်…။ လဖက်ရည်စိုင်မှာ အဖိုးဂျီးတြောက် ပင်နီတိုက်ပုံးနဲ့ သောက်နေတော့သူက သနားလို့ လဖက်ရည်ဖိုး ရှင်းလိုက်တယ်။ အဖိုးဂျီးကိုလည်း ရှင်းပီးဂျောင်းပြောတယ်။ ဟိုကတော့ သူ့ကို ပါတီဝံမို့ ကြည်ညိုပီး ပေးဒယ်အမှတ်နဲ့ ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ်… အမှန်ဂ အဲလိုဟုတ်ဝူး… သောက်ခွီး။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကော်မန့်ကို အနှောင့်မလွတ် အသွားမလွတ် ။
ခင်ဇော် says: Credit to PK Forum
Myanmar is in danger of being aid independent. Salai Maung John argues that the way international NGOs work with local groups, and especially the model of competition, may contribute to aid dependency in Myanmar.
In my experience, most of the international NGOs undermine and treat local groups as competitor, but not as partners. They treat Myanmar NGOs not as equal partners but as sub-sub-sub grants partners. They recruit the best staff from the local organisations. The international NGOs are to be blame for Myanmar being in danger of aid independency.
Cambodia appears to be aid independent not because of local organisations but the foreign, international NGOs. The international NGOs come to Myanmar not primarily to help the Burmese. They come here for their own survival. Toagreat extent, there is no an equal collaboration and authentic coordination between guest organisations and local ones.
The international NGOs should keep in mind that the primary agents of development are always the locals. The international organisations must be the channels, partners and facilitators in development through their resources. In the long run, the locals are authentic change-makers for their own communities.
There must be equal partnership between local and international NGOs in terms of planning, executing and implementing projects. The funding agencies should also be aware of that point. In short, competition model is in development is not encouraged because it causes aid independency and it does not bring real change at the grassroots level. Collaboration or coordination model is desirable, relevant for bottom-up and sustainable change.
kai says: အော်.. အင်း… အဟမ်း…။
အ၀ါဂိုဏ်းသား၅သိန်းကျော်ကြီးကို.. စား၊၀တ်၊နေရေး.. တနှစ်ဒေါ်လာ.. ၃ဘီလီယံကျော်… လှူဒါန်းထောက်ပံ့နေရတဲ့.. ကျွန်သဘောက်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်….လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ခင်ဇော် says: ရုံးက ဆိုက် အင်ဂျင်နီယာလေးက အကြွေးတင်နေသတဲ့။
Wow says: ခုခေတ်ခေးတွေကတော့ ခပ်ပြတ်ပြတ် သူတောင်းစားလုပ်တောင်းတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12397
ခင်ဇော် says: ကတောက်။
Wow says: နာတို့ကမှ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး အင်ဗက်စ်မန့်ရှိသေးတယ် တညလုံး…………………….. ဖဲရိုက်မှာလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.